Lakes of Tristaina, iray ilain'ny Andorra | Vaovao momba ny dia
Lakes of Tristaina, iray ilain'ny Andorra
Enric Gili | | Andorra, Weekend, General, Inona no ho hita
Androany dia hilazako aminao ny momba ny fitsangatsanganana mety ho an'ny rehetra ary akaiky ny firenentsika, indrindra ny farihin'i Tristaina, any amin'ny farany avaratry Andorra. Azo antoka fa iray amin'ireo làlana mahaliana indrindra eto amin'ny tanin'ny Pyrenees.
Ny farihy na ny boriborin'i Tristaina dia andiany iray farihy miorina ao an-tanànan'i Andorran any Ordino ary eo amin'ny 2300 metatra ny haavony, izay anasaran'ny Pyrenees firenena 3: Andorra, Espana ary France.
Ny farihy lehibe amin'ny sirkus dia: ny farihy aloha (ny kely indrindra, eo amin'ny 2250 metatra ny haavony ary misy loko manga mazava kokoa), ny dobo afovoany (ny salantsalany, eo amin'ny 2300 metatra ny haavony ary voahodidin'ny scree) ary ny farihy ambony (ny lehibe indrindra amin'ireo 3, misy loko manga mainty kokoa, manodidina ny 2350 metatra ny haavony ary voahodidin'ny tampon'ny 2900 metatra).
Ny tolo-kevitro momba ny zotako dia azo atao antsasaky ny andro raha manomboka aloha isika. Raha te-hiakatra amin'ny tampon'ny havoana ianao.
Ny fitsangatsanganana dia mitranga amin'ny toerana rehetra ambonin'ny haavon'ny 2000 metatra, noho izany antony izany dia tsara ny manao azy amin'ny fahavaratra. Maherin'ny antsasaky ny taona dia rakotra oram-panala tanteraka, noho izany mila snowshoes na kiraro manokana hivezivezy eny amin'ny arabe isika raha misy lanezy. Etsy ankilany, safidy tsara ny fahitana azy amin'ny fahavaratra sy ririnina rehefa mivaingana ny farihy ary feno lanezy ny tontolo iainana, amin'ny lafiny roa dia miavaka ny hatsaran-tarehy.
1 Ahoana no ahatongavana any amin'ny farihy Tristaina?
2 Inona no jerena ary inona no hatao any amin'ny farihy Tristaina?
Ahoana no ahatongavana any amin'ny farihy Tristaina?
Hankany amin'ny farihy Tristaina Handeha amin'ny làlam-pirenena CS-380 izay mankany amin'ny lemaka ski Ordino Arcalís izahay. Hiampita ny faritra Arcalís iray manontolo izahay mandra-pahatongantsika any amin'ny toerana avo indrindra, amin'ny Trano fisakafoanana La Coma, toerana hijanonanay sy hanombohantsika an-tongotra ny lalana. Ny mpitari-dalana sasany dia manoro hevitra ny fijanonana ambany kely kokoa izay misy ny famantarana hanombohana ny lalana, mamporisika anao aho handeha lavitra kokoa miaraka amin'ny fiara mankany amin'ny trano fisakafoanana ary manomboka ny làlana avy eo. Toy ny tsara tarehy ihany izy io ary saika tsy misy maha samy hafa azy afa-tsy amin'ny tranga voalohany dia manana hantsana somary mideza ilay ampahany voalohany.
Tsy afaka mandeha irery ny Circus Tristaina.
Avy eo, eo ambadiky ny trano fisakafoanana ihany no manomboka ny lalana izay mihodina manodidina ny tendrombohitra ary miakatra tsikelikely izy mandra-pahatongany any amin'ny hatoka kely izay manokatra ny fidirana amin'ireo farihy telo. Ity fiakarana voalohany ity dia mila antsasak'adiny eo ho eo.
Raha vantany vao eto no ahafahantsika manapa-kevitra ny làlana izay harahintsika sy ny zavatra tadiavintsika ho hita.
Inona no jerena ary inona no hatao any amin'ny farihy Tristaina?
Ny fitsangantsanganana izay atoroko araka ny filaharany dia:
dobo eo afovoany
fitsangatsanganana na fitsangatsanganana manodidina ny faritry ny farihy
Raha vantany vao niampita ny hatoka isika ary nidina nankany amin'ny faritry ny farihy, ny voalohany izay hihaonantsika avy eo aloha dia ny dobo afovoany, handray 45 minitra avy eo amin'ny trano fisakafoanana izahay ary 15 eo ho eo ny hatoka. Afaka mitsidika ny farihy ianao na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia.
Minitra vitsy aorian'izay dia ho tonga izahay hatrany amin'ny farihy ambony, ny lehibe indrindra. Ireo dobo 3 dia mifanakaiky be. Soso-kevitra ny hanaraka azy amin'ny ilany ankavanana, ny lalana eo ankavia dia tonga amin'ny toerana avo loatra ny tehezan'ilay tendrombohitra.
Amin'ny fahavaratra dia avela handro amin'ity farihy ity. Mazava ho azy fa ny be herim-po ihany no mahavita azy, satria farihy glacial izy io. Ny antsasaky ny taona dia mivaingana ary antsasaky ny taona tsy fa miaraka amin'ny maripana ambany dia ambany.
Raha vao nandinika sy nankafy ny Farihy Superior I Manoro anao aho mba hizoranao lalana amin'ny ankavananao izay miakatra amin'ny tendrombohitra manaraka ny lalan'ny renirano kely iray. Fiakarana mideza nefa tsy latsaky ny antsasak'adiny dia hahatratra vozona iray hafa isika (efa eo amin'ny 2500 metatra ny haavony) ahafahantsika manapa-kevitra raha hanohy hiakatra amin'ny iray amin'ireo tampon'ny Tristaina na hamita ilay fiakarana ary ankafizo ireo fomba fijery mahavariana momba ny lohasaha iray manontolo sy ny ampahany amin'i Andorra izay atolotray antsika amin'ity teboka ity.
Nanapa-kevitra ny tsy hanohy hiakatra aho ary handinika an'i Tristaina rehetra avy eto, tsy haiko raha mendrika ny fiakarana iray amin'ireo tampon-tampona izay eo akaikin'io fihaonan-tsambo io mihitsy.
Raha vantany vao nahavita ity ampahan'ny fitsangatsanganana ity isika dia afaka hidina amin'ny lalana mitovy ihany fa tsy hivily lalana mankany amin'ny dobo ambony Hankany amin'ny dobo ambany aho. Aorian'ny fidinana antsasak'adiny dia hahatratra ny tampon'ny dobo izay ahitantsika azy amin'ny halavany. Avy any ianao dia afaka mahita ny lohasaha Ordino iray manontolo izay midina hatrany El Serrat sy ireo tanàna Andorotana hafa.
Araka ny nolazaiko anao, ity no kely indrindra amin'ny 3, afaka minitra vitsy dia afaka mandeha ianao.
Ary farany, niverina tany amin'ny vozony kely voalohany izahay (sahabo ho 15 minitra avy eo amin'ny farihy ambany) ary avy eo dia nidina tany amin'ny trano fisakafoanana La Coma indray izahay.
Ireo farihy Tristaina dia fantatry ny mpitia jono ihany koa. Avela mandritra ny boribory izy io ary amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona dia ho hitanao ny olona mankafy ny fanjonoana.
Làlana somary mora io amin'ny ankapobeny, tsara aseho ary mora idirana, mamela fiovaovana marobe arakaraka ny tsiro an'ny mpaka tendrombohitra tsirairay. Tena mety ho an'ireo tia natiora sy ho an'ireo izay te hankafy Andorra amin'ny fomba fijery hafa noho ny firenen'ny Pyrenees izay mety efa nahazatra antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Andorra » Lakes of Tristaina, iray ilain'ny Andorra
Ny morontsiraka 10 tsara indrindra any Brezila
Caliente Caribe, toeram-pialantsasatra nudist any amin'ny Repoblika Dominikanina